galma kitaabaa bilisaa kan namni kamiyyuu hirmaachuu dandahu
Afaan Oromoo afaan baay'inaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaarra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti addeessetti. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan Kiswaahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. Afaan Arabaa fi afaan Kiswaahilii afaan ardii biraa yoo ta'an, Afaan Oromoo afaan Afrikaa keessatti dubbatamu keessaa Lammaffaa ta'a; osoo mootummaa yookiin wiirtuu afaanii qabaatee immoo addunyaarratti sadarkaa sadaffaa ta'u ni mala.
Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Afaan kun Afroo-Eshiyaatiik keessaa garee afaanii Kuush jalatti qooddama. Afaanota Kuushi keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miiliyoona 60 ol ta'utu dubbata. Uummatni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi Kaaba Keeniyaa keessa jiraata. Akka warri afaan qoratan jedhanitti, Afaan Oromoo loqoda(garee) afur qaba: Oromoo Boorana-Arsii-Gujii, Oromoo Bahaa, Ormaa, fi Oromoo Dhihaa fi Giddugaleessa ti.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Afaan_Oromoo&oldid=37748" irraa kan fudhatame
Last edited on 19 Waaxabajjii 2022, at 20:43
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 19 Waaxabajjii 2022, sa'aa 20:43 irratti.